I-Deep Groove Ball Bearings Efaka Isici - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Ama-Deep Groove Ball Bearings Aveza isici
Ukuveza ukuhlelwa kwesici
I-deep groove ball bearing iyona emele kakhulu yokuqhutshwa. Kufanelekile ukugijima ngesivinini esiphezulu ngisho nangejubane elikhulu kakhulu, futhi lihlala liqinile futhi alidingi ukugcinwa. I-coefficient yokuthwala iyingxenye encane, ijubane lokulinganisa liphakeme, isakhiwo silula, izindleko zokukhiqiza ziphansi, kufinyelela kalula ukucacisa ukukhiqiza okuphezulu. Isetshenziswa kakhulu embonini yensimbi eqondile, imoto encane yomsindo, imoto, isithuthuthu nemishini ejwayelekile. Yilona uhlobo olusetshenziselwa kakhulu ukubhekwa embonini yemishini. Umthwalo oyinhloko umthwalo omsakazo, ongase futhi uthwale inani elithile le-axial load.
I-axial bearing capacity of the broad radial imvume yanda, futhi i-Angle yokuxhumana iyona uma amandla e-radial ahlanzekile ethwala. I-Angle yokuxhumana ingaphezulu kune-zero uma amandla axial asetshenziswa. Ukusetshenziselwa okujwayelekile kwesikhwama sokulondoloza isimo se-ram-wave, imoto eqinile, futhi ngezinye izikhathi uhlaka lwe-nylon.
Ngemuva kokuthi ibhola elijulile libheke emgodini, i-axial displacement ye-shaft noma igobolondo ingahle ibekwe eceleni kwe-axial imvume yesibalo, ngakho-ke ukuqondiswa kwe-axial kwesikhombi se-axial kungenziwa kuzo zombili izinkomba. Ngaphezu kwalokho, ukukhiqizwa nakho kunekhono elithile lokulawula umgogodla, ongase usebenze ngokujwayelekile lapho uguqulwa 2 '~ 10' emgodini wegobolondo, kodwa unethonya elithile ekuthwaleni impilo. I-deep groove ball bearing igcina ifreyimu yensimbi ye-plate stamping wave form, futhi ukuthela okukhulu kusetshenziselwa ukugcina ifreyimu.
I-deep groove ball bearing iyindlela yokuvuthwa evame ukusetshenziswa kakhulu. Isakhiwo saso silula futhi kulula ukuyisebenzisa. It is ikakhulukazi esetshenziselwa ukuthwala umthamo we radial, kodwa lapho kwandisa imvume radial yokuthwala, ine ethile Angle ibhola yokuxhumana ibhola ukusebenza, okuyinto kungaba ukuthwala umthamo kanye axial ehlangene umthwalo. Kungasetshenziswa futhi ukuthwala umthwalo we-axial ohlanzekile lapho ijubane elijikelezayo lingakulungele ukushaya ibhola elibhekene nalo. Uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zokubheja ezilingana nobukhulu bebhola elijulile elibhekene nebhola elibhekene nalo, ukulingana kwamapayipi okulingana okuncane futhi ijubane lokulinganisa liphakeme. Kodwa ayikwazi ukumelana nomthelela, akufanelekile ukuthwala umthwalo osindayo.
Ukuhlelwa kokuhlelwa kwesigaba
I-deep groove ball bearing structure is elula, kulula ukufeza ukucaca okuphezulu kokukhiqizwa kuqhathaniswa nezinye izinhlobo, ngakho kulula ukwenza uchungechunge lokukhiqiza okuningi, futhi izindleko zokukhiqiza ziphansi, futhi ukusetshenziswa kujwayelekile kakhulu. Ama-rock groove ball bearings ngaphezu kokuyisisekelo, kanye nezinhlobonhlobo zezici ezihlukahlukene, ezifana ne-deep groove ball ephethe isembozo sothuli, i-groove ibhola ebhethini ene-rava yokugwinwa, ibhola elikhiyayo eligcwele ukubhoboza ibhola elibhekene nalo, libhekene nebhola lebhola umthamo omkhulu we-groove ball bearing, i-double row row deepings ball bearings.
Ikholomu yodwa-ibhola elijulile ibhola elibhekene nalo
Ikholomu yodwa-ibhola elijulile elibhekene nesembozo sothuli
3. Ibhola elilodwa elilodwa elimnyama eligcwele ibhola elibhekene nesembozo sothuli nokufaka uphawu lokungena
4. Ibhola elilodwa elilodwa elimnyama eliphethe ibhola elibhekene ne-stop bese umisa indandatho engxenyeni yangaphandle
5. I-deep groove ball ephethe ibhola ye-ball
6. I-double row irophu elijulile ibhola elibhekene nalo
Ubukhulu bebhola elijulile lokubheja ibhola lingenziwa phakathi:
(1) ukuthwala okuncane - ububanzi obuncane bokuthwala ngaphansi kwe-26mm;
(2) ephethe ukulinganisa okuncane - ubukhulu besayizi obungama-28-55mm;
(3) ukuphakama okuncane nokuphakathi okuphakanyisiwe kobukhulu obungama-60-115mm;
(4) ukuphakama okukhulu - ubukhulu besayizi lobukhulu obuyi-120-190mm
(5) ephethe ukukhiqiza okukhulu - ubukhulu besayizi lobukhulu be-200-430mm;
(6) ukuphakama okukhulu okhethekile - ubukhulu bokuphakama kobubanzi obungama-440mm.